Wararka Maanta: Jimco, July 5 , 2013-Maxjarka Xannaanada Xoolaha ee Jasiira oo ay ku jiraan Xoolo diyaar u ah in loo dhoofiyo dalka dibaddiisa (SAWIRRO)
Mar aan maanta booqday maxjarkaas ayaa waxaa ka socotay howlo lagu baarayo xoolaha ku jira, iyadoo xoolaha ku jiray ay isugu jireen geel iyo ari kuwaasoo lagu wado in dhawaan laga dhoofiyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan u mahadcelinaynaa Allihii noo suurogeliyay furitaanka maxjarkan oo qaadi kara in ka badan 250,000 oo neef. Marka xiga waxaan u mahad-celinaynaa dhammaan shirkaddaha Soomaaliyeed ee aan u adeegno. Waa maxjarka keliya ee ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana qabanaa baaritaannada xoolaha, daweyntooda, xannaaneyntooda, kaddibna waxaan siinnaa ganacsatada xoolaha iska leh caddeymo ku saabsan faya-qabka xoolahooda,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay soo saartay shirkadda iska leh maxjarka ee Jaziira.
Sidoo kale, warsaxaafadeedka waxaa lagu sheegay in maxjarku uu awoodo in mar qura ay ku hoyan karan 220,000 oo ari ah, 10,000 oo geel ah iyo 20,000 oo Lo’ ah.
“Maxjarku wuxuu leeyahay 47 xero guud ahaan, wuxuuna ogolaansho ka haystaa hay’adda u qaabilsan Qaramada Midoobay caafimaadka xoolaha (OIE) , isla markaana ay aqoonsadeen dalalka Carabta oo ah dalalka ugu badan ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya, gaar ahaan Suucuudiga iyo Cumaan. Maxjarku wuxuu ku shaqeyaa heerka caalamiga ah ee waafaqsan xeerarka u dajisan OIE, waxaana shaqaale ka ah dad isugu jira ajnabi iyo Soomaali oo aqoon durugsan u leh xannaanadda xoolaha, isla markaana waxuu isticmaalaa shaybaar casri ah,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Maamulaha guud ee maxjarka Jasiira, C/kamaal Maxamed Sheekh C/llaahi ayaa sheegay in maxjarku uu ruqsad buuxda ka haysto boqortooyada Sucuudiga, taasoo u ogolaanaysay inay xoolaha soo mara maxjarka loo dhoofin karo boqortooyadda Saudi Arabia.
“Maxjarku waxuu soo dhaweynayaa cid kasta, qof ama shirkad doonaysa in ay dhoofsato xoolo nool iyo mid la xalaaleeyayba si ay u hesho caddeyn iyo shahaado ay isku hubto,” ayuu yiri Cabdikamaal.
Dhanka kale, mas’uulka maxjarka ayaa sheegay in tan iyo markii ay howsha billaabeen ay ka dhoofiyeen dekedda weyn ee Muqdisho, kuwaasoo isugu jiray, geel, lo’ iyo ari. Waxaana xoolahaas lahaa shirkado kala duwan oo ka dhisan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
Shirkadaha qaata xoolaha soo mara maxjarkan ayaa waxay kala yihiin: mu’asasadda Suleymaan Al-jaabiri ee dalka Sucuudiga, shirkadda xoolaha ee Al-Cimraan, shirkadda xoolaha ee Soomaaliya.
Ugu dambeyn, maamulka guud ee maxjarka ayaa sheegay in sababaha ay u doorteen in maxjarkan ay ka hirgeliyaan deegaanka Jaziira ee duleedka magaalada Muqdisho si ay xooluhu u helaan dhul-carro-san ah oo xooluhu ay ka heli karaan hawo wanaagsan, isla markaana ku dhow dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.